प्लेयर अडी ए Android Android .0.० China Manufacturer
विवरण:प्लेयर अडी A4 6.0,खेलाडी A4 .0.०,खेलाडी A4 .0.०
Home > उत्पादनहरू > अडी एन्ड्रोइड कार डीवीडी प्लेयर > प्लेयर अडी ए Android Android .0.०
प्लेयर अडी ए Android Android .0.०
१. निम्न देशहरू सहित नक्शा:
साउदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, संयुक्त अरद अमीरेट्स, कतार, कुवेत
अस्ट्रिया, स्विजरल्याण्ड, लिक्टेनस्टीन, इटाली, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स, लक्जमबर्ग, फ्रान्स, मोनाको, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, भ्याटिकन, सैन मारिनो, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, पोर्तुगाल, जिब्राल्टर, च्यानल टापु, इ England्ल्यान्ड, आयरल्याण्ड, लिजल मान, उत्तरी आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड
अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, टर्की, रसिया, ब्राजील, अर्जेन्टिना, चिली र यस्तै एक उपलब्ध छन्
२. कृपया तुरुन्त र सुरक्षित ढुवानीको लागि भुक्तान नोटमा तपाईंको फोन नम्बर समावेश गर्नुहोस्।
वस्तु केवल Aliexpress पुष्टि ठेगानामा पठाइन्छ।
DHL / TNT / EMS वा अन्य द्रुत कोरियर द्वारा
१) आयात शुल्क, करहरू र शुल्कहरू आईटम मूल्य वा शिपिंग शुल्कमा समावेश हुँदैन। यी शुल्कहरू खरीददारको जिम्मेवारी हो?
२) 90 ०% भन्दा बढि कुनै पनि करहरू बिना खरीददारमा पुग्न सक्छ। हामी हाम्रो ग्राहकलाई कर भुक्तानी गर्ने जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्दो कोसिस गर्छौं, तर कुनै पनि खरीददारको स्थानीय आयात कर वा भन्सार ढिलाइका लागि जिम्मेवार छैन। तपाईंको समझ र ध्यान अत्यधिक सराहना गरियो
१) हामी २ YEAR S वारंटी प्रदान गर्दछौं । सबै वस्तुहरू राम्ररी प्याक छन्, नयाँ, कहिल्यै प्रयोग गरिएको छैन, मर्मत गरिएको छैन। यदि तपाईं एक गल्ती वस्तु प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, कृपया हामीसँग days दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहोस् रसीदमा हस्ताक्षर पछि। हामी यसलाई फिर्ता वा बदल्नेछौं।
२) कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई स्थापना र प्रयोगको बखत कुनै प्राविधिक समस्या छ। हामी प्रयोगकर्ताहरुलाई पेशेवर आस्थापक मार्फत यो आईटम स्थापना गर्न सुझाव दिन्छौं।
)) प्रत्येक वस्तु बाहिर पठाइनु अघि राम्रोसँग परीक्षण गरिएको हुन्छ। हामी १ 14 दिन प्रतिस्थापन ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्दछौं, र एक महिना शिपिंग लागत समर्थन गर्दछौं यदि एक महिनामा गल्ती पुष्टि गर्दछ। WITSON ले चीनबाट तपाईंको गन्तव्यमा शिपिंग लागतका लागि जिम्मेदार हुनेछ जबकि खरीददारले फिर्ताको लागत तिर्नेछ। कृपया हामीलाई यसको मूल प्याकिंगमा कुनै स्क्र्याचहरू वा क्षति बिना फिर्ता पठाउनुहोस्।
ग्यारेन्टी केवल दोषपूर्ण उत्पादनहरूको लागि मात्र कभर गर्दछ। शारीरिक क्षति वा ग्राहक द्वारा दुरुपयोग विनिमेय छैन।
प्लेयर अडी ए Android एन्ड्रोइड .0.० को लागि चित्रहरू:
प्लेयर अडी A4 6.0 खेलाडी A4 .0.० डेकलेस कार सीडी कार DVD प्लेयर9इंच GMC DVD प्लेयर DVD प्लेयर युनिभर्सल